किन लगानी सम्मेलन ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय किन लगानी सम्मेलन ?
on: १९ मंसिर २०७५, बुधबार ०६:०१ सम्पादकीय
किन लगानी सम्मेलन ?
नेपालले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ र यसका लागि निकै ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, यति ठूलो रकम नेपाल आफैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलन प्रभावकारी होला त ?
नेपालले प्रशासनिक ढिलासुस्ती रोक्न सकेको छ त ? हरेक तहमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ त ? सरकारले दूरदृष्टिका साथ कुनै योजना र विचार अघि सारेको छ त ? दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि उसका कामकारबाही त्यसैअनुसारका छन् त ? लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार कानूनमा सुधार गरियो त ?
सामाजिक सुरक्षाका लागि नयाँ प्रणाली लागू भएको छ । यसले लागत बढाउने मात्रै होइन, यसका अस्पष्टताका कारण लगानीकर्ताले थप विवाद झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि लगानीकर्ता सचेत भए पनि यहाँको कानून कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र ढिलासुस्तीकै कारण नेपाल व्यवसायमैत्री सूचकाड्ढ डुइङ बिजनेशमा गतवर्षभन्दा तल झरेको हो । सामाजिक सुरक्षाको विषय देशभित्रकै मानिसलाई राम्ररी बुझाउन सकिएको छैन । यस्तोमा नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशीहरू भनेका कि त सरकारका उच्च पदस्थलाई रिझाएर काम गर्न सक्ने कम्पनी हुन सक्छन् कि भ्रष्टाचार हुने देशमा पनि काम गर्न सक्ने कम्पनी वा व्यक्ति मात्रै हुन सक्छन् । नेपालको प्रशासनिक झन्झट यति धेरै छ कि स्वदेशीलाई समेत व्यवसाय गर्न गाह्रो छ । यस्तोमा सरकारले जतिसुकै कुरा गरे पनि लगानीकर्ताले पत्याइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
हो, हडताल हुन छोडेको छ । श्रमिक मजदूर सम्बन्धमा सुधार आएको छ । तर, यतिले मात्रै लगानीको वातावरण बन्दैन । नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण छ भनेर विगतमा भएका सम्मेलनले पनि व्याख्या गरेको थियो । त्यसलाई न विदेशीले पत्याए, न नेपालीले नै । बोलीभन्दा व्यवहारले बढी तथ्य बताउँछ । त्यसैले १० खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि लगानी भने ज्यादै न्यून आयो । पहिला छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने भएकाले नीतिगत अस्थिरता हुँदा लगानी नआएको तर्क गरियो । अहिले बलियो सरकार भएकाले लगानीकर्ताले विश्वास गर्छन् भन्ने सोच सरकारमा देखिन्छ । तर, जबसम्म किन लगानी आएन भन्ने वास्तविक तथ्य बुझेर त्यसमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, लगानी सम्मेलनले खासै केही हुनेवाला छैन ।
नेपालले प्रशासनिक ढिलासुस्ती रोक्न सकेको छ त ? हरेक तहमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ त ? सरकारले दूरदृष्टिका साथ कुनै योजना र विचार अघि सारेको छ त ? दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि उसका कामकारबाही त्यसैअनुसारका छन् त ? लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार कानूनमा सुधार गरियो त ? समृद्धि नारामात्रै बनेको छ कि प्रतिबद्धताका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ? यी तथ्यलाई केलाउनेबित्तिकै जोकोही अहिलेको सरकारलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
अर्को कुरा, अहिलेको सरकारको दुई तिहाइ बहुमत नै यसलाई अविश्वास गर्ने मूल आधार बनेको छ । मन्त्रीहरू बेलगाम भएर जथाभावी बोलिहिँडेका छन् । मन्त्रीको भनाइ नीतिगत हुन सक्ने सम्भावनालाई हरेक लगानीकर्ताले हेर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै जग्गामा निजी स्वामित्व हुँदा समस्या आयो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । दुई तिहाइको सरकार भएकाले संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने डर लगानीकर्तालाई हुन्छ ।
लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने, करप्रणालीको सरलता, कर्मचारीतन्त्रको सहयोग आदि पक्षमा सुधार नआएसम्म जति नै नाफाको सम्भावना भए पनि लगानी गर्न जोकोही पनि हिचकिचाउँछन् । यस्तोमा सम्मेलन गर्नु भनेको प्रचारबाजी मात्रै हुन सक्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्ने गरी पूर्ण तयारी गरेपछि मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।